Sambava: Tanora roa lahy nanao raharaham-pihavanana rehefa tratra nampiasa vola sandoka
jeudi, 07 novembre 2019 12:45
Ny harivan’ny alatsinainy 04 novambra 2019 teo, nandritra ny alim-pandihizina tao Maroambihy no nampiasan'ireto tanora roa lahy ireto ny vola sandoka, ary mbola nahasaronana 180 000Ar sandoka avokoa izy ireo. Nomena safidy izy ireo na hatolotra ny mpitandro filaminana na hanao raharaham-pihavanana, ka hiantoka ny lany nandritra ny alim-pandihizana tamin'ny mpikarakara. Tsy nihambahamba izy ireo ny nisafidy ny faharoa.
Efa fantatra kosa ny mombamomba ireto tanora roa izay nanaparitaka vola sandoka ireto, ka ny iray dia zatovo avy ao Maroambihy ihany, fa ny iray dia avy ao Ambodiampana Lokoho, izay efa samy karohin’ny Polisim-pirenena teny an-toerana, saingy efa samy nitsoaka izy roalahy.
Sahiran-tsaina ny mponina, indrindra ny any ambanivohitra amin'ny fiparitahan’ny vola sandoka 20 000 Ariary izay manomboka sarotra amin'izy ireo ny manavaka ny tena izy sy ny sandoka.
Marihina fa helohan'ny lalàna sazy an-terivozona mandram-pahafaty ny fanaovana sy fampiasana vola sandoka, ary ny fitsarana, na tsy misy aza mpitory dia mampanenjika ireo rehetra mandika lalàna, fa tsy vitan'izay fifampiraharahana izany.